Yakakwira Frequency Induction Brazing Carbide Kubvisa kweMishonga Zvishandiso Zvishandiso
Carbide Kudhonza kwakanangana induction brazing maitiro ayo akaomeswa matipi ezve chinhu anoshandiswa kune yepasi zvinhu kuti ibudise yakaoma zvakanyanya kucheka.
Chinangwa cheichi chishandiso: Induction brazing carbide tipping yezvokurapa maturusi Ivo vangade kushandisa induction yekudziya tekinoroji kutsiva mwenje uye kuzadzisa yakachena brazing maitiro.
Induction Brazing Midziyo:
DW-Zvakanaka hf-15 induction ichiona michina yakagadzirirwa 40% kupedzisa maitiro. Iyo inoshanduka yedhijitari chikamu chekutonga inopa inoshanda kushanda mune yakafara frequency renji.
Chipenga chesimbi isina simbi 6 13/16 "(17 cm) chakareba ne 0.775" (1.96 cm) yakafara nzvimbo yekupisa yaifanirwa kuve yakashongedzwa nemaviri carbide inoisa 25/32 "(1.98 cm) yakareba, 1/8" (7.8 mm) yakafara, 3/32 ”(2.54 cm) yakadzika. Paive nekupindirana 9/16 "(1.42 cm) kureba, 1/8" (25.4 mm) yakafara (kudivi rega rekucheka musoro) uye 1/16 "(1.58 mm) yakadzika.
Brazing flux yakashandiswa kunzvimbo yekubatana. Iyo carbide inoisa yakabva yaiswa pakati pemafomu ekutanga. Sangano rakavharwa pamwe chete ndokuunzwa mu induction heat coil. Kuchenesa kwakaiswa kwemasekondi masere kusvika tembiricha ~ ~ 8 ° F (1400 ° C). Izvo zvikamu zvakabudirira kusunganidzwa pamwechete.
Categories Technologies Tags brazing, brazing carbide, Kuchengetedza Carbide Kudhonza, brazing carbide ichipinza induction, brazing carbide ichisimudzira induction heater, Carbide Kudambura, HF kubheka carbide, HF brazing carbide ichisimudza, kuburitsa kusungurudza, kuburitsa kusunga carbide, Induction Brazing Carbide Kubvisa, induction brazing zvekushandisa zvekurapa, kuburitsa kusungira kusungira Post navigation